कोरोना संक्रमितको खोजी तीव्र, संघ र प्रदेशबाट ३ टोली परिचालित – जुगल टाईम्स
Posted on २३ बैशाख २०७७, मंगलवार १०:५३ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
एउटै टोलमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिएपछि बाँकेको नेपालगन्जमा पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर)परीक्षणको दायरालाई विस्तार गरिएको छ। अन्य सम्भावित संक्रमितको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।
संक्रमितको खोजीका साथै ट्राभल हिस्ट्री लिनका लागि सहयोेग गर्न संघबाट दुई जनाको टोली परिचालन भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसीडी)का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार सम्भावित संक्रमितको ट्रेसिङ र ट्राभल हिस्ट्रीलगायतमा संलग्न हुने गरी संघबाट दुई वटा टोली नेपालगन्ज गएको छ। उक्त टोली संक्रमण देखिएको स्थानीय बासिन्दाको घर-घरमा खटिएको छ।
सीमावर्ती सहर नेपालगन्जमा हालसम्म १६ जना संक्रमित फेला परेका छन्। उनीहरूबाट अन्यमा पनि सरेको विज्ञहरूको आशंका छ। रोग निन्त्रण महाशाखाबाट हेमन्त ओझा, प्रदीप रिमालसहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयबाट यदुचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा एउटा टोली खटिएको छ। प्रदेश ५ बाट पनि टोली परिचालन भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संक्रमितमध्ये १५ जना एउटै टोलका भएकाले संक्रमण अन्यमा पनि भएको आशंका छ। उनले भने, ‘एउटै टोलमा धेरै संख्या देखिएको र आवतजावत गरेको पाइएकाले अलि जोखिमयुक्त मानिएको छ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रको जोलहानपुर्वाका बासिन्दामा बढी संक्रमण पाइएको हो। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको परीक्षण हुने क्रममा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार मुलुकभर २१ हजार ५ सय २३ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन। जसमध्ये प्रदेश नं ५ मा झन्डै आधा व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार यस प्रदेशमा ९ हजार ९ सय ५३ जना विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्।
संक्रमित कहाँ/कति ?
मुलुकभर हालसम्म संक्रमितको संख्या ७५ छ। संक्रमितमध्ये पुरुष ५८ र महिला १७ जना छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ३१, २ मा १३ र बागमती प्रदेशमा ७ जना छन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २ र ५ मा १७ र सुदूरपश्चिममा ५ जना संक्रमित फेला परेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म संक्रमित फेला परेका छैनन्। जसमध्ये १६ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। उपचाररत संक्रमितको संख्या ५९ छ। विराटनगरमा ३१, नेपालगन्जमा १६, वीरगन्जमा ९, धनगढीमा १, भरतपुरमा १ र रुपन्देहीमा १ जना छन्। सबैको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेको प्रवक्ता डा . देवकोटाले जानकारी दिए। आइसोलेसनमा बसिरहेका सम्भावित संक्रमितको संख्या १ सय ६ जना रहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
Posted on २७ चैत्र २०७६, बिहीबार २०:५४ Author जुगल टाईम्स
सर्लाही : जिल्लाको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भारतबाट लुकिछिपी आएका ५ जना प्रहरीको आँखा छल्दै छिर्न सफल भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशमा मजदुरी गरिरहेका ५ जना बुधबार राति चन्द्रनगर आइपुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले जानकारी दिए। भारतको उत्तरप्रदेशमा मजदुरी गरिरहेका वडा नम्बर ६ कामत टोलका ५ जना बुधबार राति घर आइपुगेका छन्। अध्यक्ष महतोले बिहीबार […]
Posted on २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २०:०० Author जुगल टाईम्स
द्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी छन् । अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटमा शुरू भएको नीति तथा कार्यक्रम वाचन साँझ ६ बजेर ५० मिनेटमा सकिएको थियो । हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :
Posted on १८ चैत्र २०७६, मंगलवार १२:५८ Author प्रदेश न 1
भक्तपुर, १८ चैत्र । भक्तपुर सुर्यविनायक चोकमा आज बिहान प्रहरीमाथि चक्कु प्रहार भएको छ । सुर्यविनायक चोकमा डिउटीमा रहेका प्रहरीले एक व्यक्तिलाई लकडाउनमा ननिस्कन सम्झाउँदा खाेजे । तर ती व्यक्तिले निहुँ खोजेर गुलेलीले प्रहरीमाथि नै प्रहार गरेर भागे । प्रहरीले लखेट्दै भुलाँचा चोकम्म पुगेपछि समाउन खोज्दा सो व्यक्तिले हवल्दारमाथि फेरि चक्कु प्रहार गरे । सुदीप […]